Mindful Decluttering • Brand You Academy
1. How to get most out of this course
2. Meditation Setting Intention for the course
3. What is Decluttering?
4. Mind Decluttering, Model of communication
7. Creating Positive thoughts (Sushi Train)
8. Tips & Tricks for Mind Decluttering
9. Body Decluttering, Vitality
10. Awareness, FANTASTIC assessment
10.1. Material: FANTASTIC Lifestyle Assessment & Result (download the pdf)
11. Taking Action: Nutrition & Sleep
11.1. Material: Nutrition and Sleep Record (download the pdf)
12. Taking Action: Physical Movement
13. Accountability: Creating Habit
14. Space Decluttering
15. System for Space Decluttering
16. Forming Habits of Mindful Decluttering in everyday life
16.1. Material: Know your WHY (download the pdf)
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့တစ်နေ့ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ တစ်နေ့တာက အဆင်ပြေချောမွေ့မနေဘူး။ တစ်နေပြီးတစ်နေ့ Hamster Wheel ဘီးလုံးလေးထဲက ပူးကြွက်လေးတစ်ကောင်လိုပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ဘီးလေးလည်လည် ဒီအရှုပ်တွေထဲမှာပဲ လည်နေတယ်။ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတယ်။ ခံစားမှုတွေထွေပြားနေတယ်။ အာရုံတွေလည်း စုစည်းလို့မရ၊ ခေါင်းထဲ၊ စိတ်ထဲ၊ အတွေးထဲမှာပါ လုပ်ရန်ရှိတွေ၊ လူမှုရေးပြဿနာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လည်း ပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ Tension တွေ တော်တော်များနေရင်တော့ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အချိန်တန်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် Mindful Decluttering course နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Course လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Trainer အနေနဲ့ Coaching တွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ တော်တော်များများ ကြုံနေတတ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ မကောင်းသော ခံစားချက်တွေက ကိုယ့်ဘဝကို သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမနေတာနဲ့ ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒီ course ကိုဖန်တီးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mindful Decluttering course ကနေပြီးတော့
(၁) Mind Decluttering
(၂) Body Decluttering
(၃) Space Decluttering
ခေါင်းစဉ်များနှင့်အတူ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လက်တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ Clutter အစုအပုံ၊ အရှုပ်ထုပ်ပေါင်းများစွာကို ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။
လူတော်တော်များများကလုပ်ရမဲ့ အသိ၊ knowledge တွေရှိကြပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ ဘယ်ကစလုပ်ရမှာလဲ မသိသလို၊ ယခု ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ပုံစံကနေ ပြောင်းဖို့ရာအတွက် သေချာနားလည်တာမျိုး မရှိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Course အတွင်းမှာတော့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမဲ့ နည်းတွေအပြင် ဘာကြောင့်ကိုယ်က ဒီလိုပုံစံမျိုးပြုမူဖြစ်နေတာလည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မိမိကိုယ်ကို သေချာဆန်းစစ်နိုင်မှာပါ။
●ပြဿနာ အခက်အခဲ တစ်ခုခုကြုံတာနဲ့ ချက်ချင်းစိတ်ရှုပ်မကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတွေ (emotions) တွေဝင်လာပြီး တော်ရုံဖြေဖျောက်လို့မရတဲ့သူတွေ။
●ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်းအောင် အေးချမ်းမှု ရှာဖွေချင်တဲ့သူတွေ။
●ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝ၊ ခန္ဓာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်တိုင်းကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စီမံခန့်ခွဲရင်း ဘဝကိုဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတွေ
●ခေါင်းကြည်ကြည်နဲ့ Productivity တက်အောင် ပိုပြီးထိရောက်စွာ အကျိုးရှိရှိအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ
●အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အိမ်နဲ့ကြားမှာ ရှုပ်နေရင်း လက်ရှိနေထိုင်မှုပုံစံကို ၁၀၀% စိတ်တိုင်းမကျလို့ အဖြေရှာချင်နေတဲ့သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
1. Introduction to Mindful Decluttering
2. How to get most out of this course
3. Meditation Setting Intention for the course
4. What is Decluttering?
5. Mind Decluttering, Model of communication
8. Creating Positive thoughts (Sushi Train)
9. Tips & Tricks for Mind Decluttering
10. Body Decluttering, Vitality
11. Awareness, FANTASTIC assessment
12. Taking Action: Nutrition & Sleep
13. Taking Action: Physical Movement
14. Accountability: Creating Habit
15. Space Decluttering
16. System for Space Decluttering
17. Forming Habits of Mindful Decluttering in everyday life